ဦးအောင်သိန်းနဲ့ ကြာဆံချက်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ဦးအောင်သိန်းနဲ့ ကြာဆံချက်…	31
Posted by ဦးကျောက်ခဲ on Nov 25, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 31 comments
“ကိုစိန်ရေ…. ဗျို့… ကိုစိန်… တံခါးဖွင့်ပါဦးဗျ”
မော်တော်ကား ဆီဖြည့်ပြီး ပြန်လာတဲ့ အဖေနဲ့ မောင်ကျောက်ခဲ အိမ်တံခါးပိတ်ပြီးယုံရှိသေး ၊ အိမ်ရှေ့ကနေ အော်ခေါ်နေတဲ့ အိမ်နီးချင်း အဖေ့သူငယ်ချင်း ဦးအောင်သိန်းရဲ့ အသံကြောင့် အဖေလည်း အိမ်တံခါးပြန်ဖွင့်ရင်း…
“ရေးကြီးသုတ်ပြာ ဘယ်လိုဖြစ်ရပြန်တာတုန်း ကိုအောင်သိန်းရဲ့” လို့ အမေးရှိလိုက်တော့…
“ကိုစိန်… မေးချင်ရင်နောင်မှမေး… အခု ကျုပ်မျောနေတယ်… ခင်ဗျားပိုက်ဆံနဲ့ရိုက်မှဖြစ်တော့မယ် ၊ ကျုပ်ကို ပိုက်ဆံနှစ်သောင်းခဏလှည့်ဗျာ ။ ဟေ့လူ … ခင်ဗျားကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံနော်”
“ဟား ဟား ဟား … ကိုအောင်သိန်းရယ် ဒီအိမ်မှာ ကျနော်က အိမ်ထောင်ဦးစီး ၊ စီးပွါးလည်း ကျနော်ပဲရှာတာမို့ အားလုံး ကျုပ်ပိုက်ဆံပါဗျာ ။ ကဲ ကဲ… ခဏလေး”
အဖေလည်း ရယ်ရယ်မောမော စကားပြန်ရင်း ဦးလေးဦးအောင်သိန်းကို ဗီရိုထဲကနေ ပိုက်ဆံ ထုတ်ပေးပါတယ် ။ ပိုက်ဆံလည်းယူပြီးရော ဦးလေးဦးအောင်သိန်းလည်း သူ့အိမ်ဘက်ကို ခပ်သုတ်သုတ်ပြန်သွားပါရောခင်ဗျ ။
တကယ်တော့ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးက မောင်ကျောက်ခဲတို့ မိသားစုအတွက် မထူးဆန်းလှပါဘူး ။ ဦးလေးဦးအောင်သိန်း သူ့အိမ်မှာ ဖဲကြိတ်ဝိုင်းထောင်လို့ ဖဲရှုံးပြီဆို အဖေ့ဆီက အမြဲပိုက်ဆံလာယူနေကြလေ ။ သူ ပိုက်ဆံလာချေးတာက သူ့မှာမရှိလို့မဟုတ် ၊ မောင်ကျောက်ခဲရဲ့ မွေးသဖခင် ပိုက်ဆံက သူ့အတွက် ကံကောင်းစေတယ် ၊ အဲသည့်ပိုက်ဆံနဲ့ ဖဲရိုက်ရင် နိုင်တယ်ဆိုပြီး ရှုံးတိုင်းလာယူတာပါ ။ အဲသည့်လိုလာယူရင် မောင်ကျောက်ခဲတို့မိသားစုလည်း အလွန်ပျော်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူပိုက်ဆံပြန်လာဆပ်ရင် လက်ဗလာနဲ့မလာပဲ စားကောင်းသောက်ဖွယ် ချိုင့်ကြီးချိုင့်ငယ်နဲ့ အမြဲပါလာတတ်ကိုး… အဲသည့်တော့ ဦးအောင်သိန်းကြီး နိုင်ပါစေပေါ့ဗျာ…
အနှီ ဦးအောင်သိန်းက အဖေ့ငယ်သူငယ်ချင်းဆိုလည်းဟုတ် ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ် ။ သူက ပြည်တွင်းရေကြောင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သွားတဲ့ သင်္ဘောပေါ်မှာ စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်တာပါ ။ ဟိုးအရင် မဆလခေတ်က အဲသည့်လိုဆိုင်အားလုံးကို လုပ်သားပိုင်ဆိုပြီး လုပ်ကြရတာတောင်မှ သူကဝန်ထမ်းဖြစ်ရဲ့နဲ့ အစိုးရသင်္ဘောပေါ် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်လောက်အောင် လူချစ်လူခင်များသူပါ ။ သူ့ဆိုင်က အကြော်အလှော် ဟင်းချက်လက်ရာ အတော်ကောင်းပြီး မြို့ပေါ်က စားသောက်ဆိုင်တွေလက်ရာကိုမီတာမို့ အဲသည့်ခေတ်က ရေလမ်းခရီးသွားတော့မယ်ဆို သူ့ဆိုင်ရှိတဲ့ သင်္ဘောကို ဘွတ်ကင်တင်ပြီး စီးကြတဲ့အထိပါ…
အမြဲတန်း ကတုံးဆံထောက် စွပ်ကျယ်လက်စကနဲ့ ဦးအောင်သိန်းက အလွန်လည်း အာဝဇ္ဇန်းရွှင်ပါတယ် ။ သူ့အကျင့်က ညနေ ၄း၃၀ ဆို ပုလင်းနဲ့ဖန်ခွက်ကိုင်ပါပြီ ၊ ၃-ပက်လောက်သောက်ပြီး ခပ်ထွေထွေဖြစ်လာရင်တော့ မောင်ကျောက်ခဲတို့အိမ်ဘက်ကိုကူး ထွေရာလေးပါး ရယ်စရာတွေပြောပြီး အဖေနဲ့ စကားဖောင်ဖွဲ့ပါတော့တယ် ။ ပြီးရင် အဖေ့ကိုလည်း စ ပါသေးတယ်…
“မင်း အဖေက အရက်သာတိုက်မရတာ ၊ အမြည်းစားဖို့ဆို စပါယ်ရှယ်လစ် … အာလူးပေးပြီး အောက်ကြည့်လိုက်ရင် ငါ့အမြည်းပန်းကန်က ပြောင်သလင်းခါနေပြီကွ” လို့ အမြဲပြောတတ်ပါတယ် … ဟုတ်လည်း ဟုတ်တာကိုးခင်ဗျ…
အဖေ သင်္ဘောတက်သွားတော့ ဦးအောင်သိန်း ညနေစောင်းလို့ အရက်သောက်ပြီဆို ဘော်ဒါအသစ် ဘိုနီ ၊ ဘိုဖြူ ၊ ရွှေဂဲတို့နဲ့ ဝိုင်းထိုင်ပါတယ် ။ သူတို့တွေက လူတော့မဟုတ်ပေမည့် ညနေ ၄း၃၀ လို့ ပုလင်းသံဖန်ခွက်သံကြားရရင် ရောက်ရာအရပ်ကနေ စားပွဲဝိုင်းကို ဒုန်းစိုင်းတော့တာပဲ ။ ဘိုနီက အိမ် ဖိနပ်ချွတ်မှာ မွေးထားတဲ့ ခွေး ခင်ဗျ ၊ မူးလာရင် အားကြီးချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ကန်ကန်ကျောက်ကျောက် အိပ်လိုက်တာ သိုးနေတာပဲ ။ ဘိုဖြူကတော့ သွားမစနဲ့ မူးလာရင် ယိမ်းထိုးပြီးလမ်းလျှောက် ဟိုအပေါ် သည်အပေါ် ဆန်အိတ်ပေါ်က ပြုတ်ကျရင်တောင် နီးရာ သတ္တဝါကိုရန်ရှာတဲ့ ကြောင်ငမူး ။ အဲ… ရွှေဂဲကတော့ တဘာသာ… နည်းနည်းသောက်ပြီးရင် အတောင်ပံခတ် တဂစ်ဂစ်နဲ့အော် … ပြီးရင် ပက်လက်အိပ်သွားတဲ့ ကြက်တူရွေးငမူးပါ ။ ဦးအောင်သိန်းလား… သူ့ဘော်ဒါတွေမူးတာကြည့်ပြီး တဟားဟားနဲ့ အော်ရယ်တော့တာပဲ ။
ဦးအောင်သိန်းက အရက် ဖဲ မိန်းမ ဘာမှမကင်းသလို သူ့ရဲ့ ငယ်ဘဝက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ။ သူ့အဖေရော အမေပါ ကရင်သွေးပါ ပါတယ် ၊ သူ့အဖေက တောသူဋ္ဌေး မြာသမားလို့ခေါ်ရမယ်ထင်ရဲ့ ၊ မိန်းမပေါင်းများစွာ ယူသူပါ ။ ဘယ်လောက် မိန်းမယူပက်စက်သလဲဆိုရင် ဦးအောင်သိန်းအမေနဲ့ ဦးအောင်သိန်းရဲ့ ဖအေတူ မအေကွဲ အမကြီးတို့က သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်တွေပါ ။ ဦးအောင်သိန်း မိဘတွေ အိမ်ထောင်ကွဲကြပြန်တော့ “ညည်း မောင်လေးကို ညည်းပဲယူတော့အေ” ဆိုပြီး သူ့အမေက ထားခဲ့တာမို့ ၊ သူ့ခမြာ ဖအေတူ မအေကွဲ အမအပျိုကြီးလက်ပေါ် ကြီးပြင်းလာရတာ အပျိုကြီး အသက် ၈၀ နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိခင်ဗျ ။
ငယ်ငယ်က ဘယ်လောက် ဆိုးပေတေမိုက်လာတယ်ဆိုတာ သူ့ခေါင်းက သက်သေပါ ၊ တစ်ခေါင်းလုံး အနာရွတ် ဗရပွနဲ့လေ ။ အဲသည့် အနာရွတ်တွေမှာ သမိုင်းကြောင်းတွေလည်းရှိတာမို့ ဦးအောင်သိန်း ရှေးဖြစ်ဟောင်း အောက်မေ့ဘွယ်တွေပြောရင် မောင်ကျောက်ခဲတို့ တမိသားစုလုံး တအံ့တဩနဲ့ စုတ်သတ်ပြီး နားထောင်ရပါတယ် ။ မောင်ကျောက်ခဲတို့ အဖေက ဦးအောင်သိန်းထက် ၅-နှစ်လောက် ငယ်တာမို့ အဖေဝိုးတိုးဝါးတား သိပ်မမှတ်မိတဲ့ ကေအန်ဒီအို ခေတ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အကြောင်း ပြန်ပြောပြရင် သည်းထိတ်ရင်ဖိုပါ ။ ဦးအောင်သိန်းက ခရေစေ့တွင်းကျ ပြန်ပြောနိုင်မှာပေါ့ … သူ ခလေးသာသာ လူပျိုပေါက်မဖြစ်တဖြစ်မှာ ကေအန်ဒီအိုနဲ့လိုက်ပြီး မိုင်းခွဲတတ် ချောင်းပစ်တတ်နေပြီလေ ။
ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းက ကောင်းစေဖို့ဖြစ်လေသလား ဆိုးစေဖို့ဖြစ်လေသလားတော့မသိ ၊ အသက် ၁၂-၁၃ နှစ်နဲ့ ကေအန်ဒီအို ဆတ်သားလုပ်နေတဲ့ သူ့ကို ဟင်္သတရဲစခန်းက မသင်္ကာမှူနဲ့ ဖမ်းပါတော့တယ် ။
“ကျနော့်ကိုဗျာ ဂတ်တဲက အုတ်ရေကန်ထဲထည့်ပြီး ရေပေါ်ကို ပေါ်လာတိုင်း နံပါတ်တုတ်နဲ့ ခေါင်းကိုရိုက်တာ ၊ တခေါင်းလုံး သွေးချင်းချင်းရဲနေတာပဲ ။ ကံကောင်းပြီး မမကြီးအသိမြန်သွားလို့ ငွေထုပ်ပိုက်ပြီး ဋ္ဌာနာအုပ်ကို ရှိခိုးဦးချ မနဲတောင်းပန်ပါမှ ပြန်လွတ်တယ်… ။ ရဲလက်ကလည်းလွတ်ရော ၆-လလောက် မနဲဆေးကုယူလိုက်ရတာဗျ ။ နောက်ပိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ စစ်တပ်က ပိုက်စိတ်တိုက်ပြီး စစ်ဆင်ရေးတွေလုပ် ၊ ကျနော်တို့လည်း မြို့ပေါ်ပြောင်းရတာမို့ ကေအန်ဒီအိုနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်” …
မိုက်ဇက မသေးတာမို့ မြို့ပေါ်ရောက်လည်း ဦးအောင်သိန်းအချိုးက မပြောင်းပါဘူး ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သေစာရှင်စာသင်ဖူးတာကလွဲရင် ၊ အတန်းပညာကလည်းမတတ် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရပ်ကွက်တကာလှည့်ပြီး ရန်ဖြစ် ၊ ညနေစောင်းရင် တရုတ်ဘုံဆိုင်မှာ အရက်သောက် အကျင့်ကောင်းတွေ အကုန်တတ်ပြီလေ ။ နောက်ဆုံး ဆိုင်ရှင်ပေါက်ဖော်ကြီးလင်မယားက မနေနိုင်တော့တာမို့ သူ့လက်ထဲ ပိုက်ဆံမထည့်ဖို့ သူ့အမကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိတ်မှာပါတော့တယ် ။ ပိုက်ဆံမရှိလည်း အရက်သောက်ချင်တာမို့ ပေါက်ဖော်ကြီးကို တနေကုန်ခိုင်းချင်တာအကုန်ခိုင်း ညနေစောင်းရင် ခေါက်ဆွဲတစ်ပွဲနဲ့ အရက်တစ်စိတ်တိုက်ရမယ်ဆိုပြီး သွားသောင်းကျန်းလိုက်တာ နောက်ဆုံး အဲသည့်ဆိုင်မှာ ပေါက်ဖော်ကြီး မျက်နှာလွှဲရတဲ့ လက်ထောက် အကြော်ဆရာဖြစ်သွားပါရောတဲ့ ။ အဲသည့်ကနေ သူလည်း အချက်အပြုတ်ကို ဝါသနာပါသွားပြီး ဆရာစုံအောင် တပည့်ခံလိုက်တာ နောက်ပိုင်း လူကြီးတစ်ယောက် မ စ လို့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်သွားတဲ့ သင်္ဘောပေါ် ဆိုင်ဖွင့် စီးပွါးအတော်ဖြစ်တဲ့အထိပါ ။ ဒါပေမည့် ချွင်းချက်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် … VIP လို့ခေါ်တဲ့ လူကြီးလမ်းကြောင်းရှိရင် ချက်ဖို့လိုက်ရပါတယ် ။
အဲသည့် လူကြီးလမ်းကြောင်းမှာ ဦးအောင်သိန်း ကြုံခဲ့ရတာလေး အိမ်လာပြီးအဖေ့ကို ဖောက်သည်ချလို့ ပြန်ပြောပါရစေဦး…
မဆလ ခေတ်နှောင်းပိုင်းမှာပေါ့ … နိုင်ငံတော်အဆင့်လူကြီးကတော်တစ်ဦးနဲ့ ဝန်ကြီး ဝန်လေးကတော်တွေ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အနှံ့ ခရီးထွက်ကြတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာပါ ။ ထုံးစံအတိုင်း ဇာတ်လိုက်ကျော် ဦးအောင်သိန်းလည်း ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့တွေဈေးဝယ် သူ့အတွက်ရိက္ခာ အရက်ပုလင်းတွေလည်းဝယ်ပြီး သင်္ဘောပေါ်မှာ အသင့်စောင့်နေတာပေါ့ဗျာ ။ ကတော်တွေလည်းရောက်လို့ သင်္ဘောလည်းကမ်းကခွါပါမှ ညွှန်ချုပ်က မပြောမဆို ဦးအောင်သိန်းအခန်းကို ရှောင်တခင်ဝင်ပြီး သူ့ပုလင်းတွေကို သိမ်းလိုက်ပါတော့တယ်…
“အောင်သိန်း…. လူကြီးကတော် အမျိုးသမီးတွေပါလာတာ မင်း မသောက်ရဘူး”… တဲ့
ဒုက္ခနဲ့ လှလှ… အဲ အဲ… ဒုက္ခနဲ့ ဦးအောင်သိန်းတွေ့ချေပြီ ။ နေညိုတော့ လေကပြို ၊ လူကလည်း ကတုန်ကရင် ၊ အလုပ် လုပ်ရတာလည်းစိတ်မပါ ၊ အဲသည့်ညက အိပ်မပျော်ပါဘူးတဲ့ ။ သန်းခေါင်ကျော်တော့ အိပ်ရာပြန်ထပြီး လူကြီးကတော်တွေ နံနက်စာ “ကြာဆံချက်” စားမယ်ဆိုလို့ စိတ်မပါ လက်မပါ ပြင်ဆင်ရပါတော့သတဲ့ ။ နံနက်လင်းတော့ ကတော်လေးတွေနဲ့ ညွှန်ချုပ်ကြီးလည်း ဦးအောင်သိန်း ချက်ထားတာတွေ လာမြည်းကြည့်ပြီး မျက်လုံး မျက်ဆန်ပြူး ပွက်လောရိုက်ကုန်ကြပါတော့တယ်…
“ဟိုက်… သောက်ခွေး ၊ အောင်သိန်း မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ ။ ကြာဆန်ချက်က ဆီမပါပြားမပါ … လက်ဆေးရေကြနေတာပဲ ။ ဆင်းဝယ်ရအောင် မြို့နဲ့လည်းမနီး … မင်းတော့ ပုသိမ်ရောက်ရင် အထုပ်ပိုက်ပြီး ဆင်းဖို့ပြင်ပေတော့” လို့ ကြိမ်းမောင်းပါတော့တယ်….
အဲသည့်အချိန်မှာပဲ လူကြီးကတော်ချုပ် စားသောက်ခန်းထဲဝင်လာပြီး …
“ကျက်ပြီလားဟင်… စားတော့မယ်” လို့ လောဆော်ပါသတဲ့ ။ ကတော်တွေလည်း မျက်နှာပျက် ၊ ညွှန်ချုပ်ကြီးလည်း ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိတွေဖြစ် ၊ ဦးအောင်သိန်းလည်း “ငါတော့ သွားပဟ” ဆိုပြီး ပျားတုတ်ကုန်ကြပါသတဲ့ ။ နောက်ဆုံးတော့ ဖြစ်လိုရာဖြစ်ဆိုပြီး ကြာဆန်ချက်ပန်းကန်တွေ ချပေးလိုက်တော့… ကတော်ချုပ်ကြီးက ရှလွတ်စ် ရှလွတ်စ်ဆိုပြီး ခေါင်းမမော့ပေမည့် ဝန်ကတော်တွေ မျက်စောင်းက ဦးအောင်သိန်းဆီ အစုလိုက်အပုံလိုက်ရောက်လာပါတော့တယ် ။
ကတော်ချုပ်ကြီးလည်း တစ်ပန်းကန်ကုန်သွားတော့ နောက်ထပ်တစ်ပန်းကန် လှမ်းမှာရင်း…
“ကောင်းလိုက်တဲ့ ကြာဆံချက် ၊ ဒါမျိုးစားချင်နေတာကြာပြီ ။ ရန်ကုန်မှာက ဟင်းချိုမှုန့်အရသာနဲ့ အပေါ်မှာ ဆီတွေ အိုင်နေအောင်ချက်ကြတာ မမ ဘယ်လိုမှစားလို့မရဘူး… ။ ဒီကြာဆန်ချက်က မမ အဒေါ်တွေချက်တဲ့လက်ရာနဲ့ တပုံစံထဲပဲ”
ဦးအောင်သိန်းလည်း မျက်လုံးပြူးသွားသလို စားသောက်ခန်းတစ်ခုလုံးလည်း ငြိမ်ကျသွားပါတယ် ။ နောင်မှ ဝန်ကတော်တွေဆီက တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ချီးမွမ်းသံတွေထွက်လာပြီး အားရပါးရ ဝိုင်းဝန်းအားပေးလိုက်ကြတာ ကြာဆံချက်တစ်အိုးလုံးလည်းပြောင် ညွှန်ချုပ်ကြီးလည်း ဖြီးနေတာပဲတဲ့ ။ နောက်တော့ ညွှန်ချုပ်ကြီးလည်း ဦးအောင်သိန်းကို အသာလက်ကုပ်ခေါ်ပြီး…
“အောင်သိန်း မင်း ပုလင်းတွေပြန်ယူ ။ လူရှေ့တော့ အနံ့မထွက်စေနဲ့ … နောင်လည်း ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာ ။ ငါ့မှာ ရင်ကို ထိတ်နေတာပဲ… တော်ပါသေးရဲ့” လို့ ဘုရားတရင်း တောင်းပန်ရှာသတဲ့…
အဲသည့်လိုနဲ့ပဲ ချောချောမွေ့မွေ့ ခရီးစဉ်ပြီးသွားပြီး … ဦးအောင်သိန်းကြီး အဖေ့ကိုအဲသည့်အကြောင်းဖောက်သည်ချရင်း တဟားဟား ရယ်ပွဲဖွဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျား…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟယ်။
ရှင် က ချက်နည်းတော့ ချန်ခဲ့တာလားး ??
အမှန်က ကျနော်လည်း ဆီပေါလောကို လုံးဝမကြိုက်။
ကြက်သားချို လေးနဲ့အရည်လေးနဲ့ ။
ခု မိုးတွေ အားဂျီးရွာနေတာဗျာ။
ဦးကျောက်ခဲ says: သွတ်ပြားရဲ့ အချက်အပြုတ်ဆြာက အဲသည့် ဦးအောင်သိန်း…
ငယ်ငယ်တုန်းက သူ ချက်ပြီဆို ဘေးကနေဟင်းမြည်းရင်း ထိုင်ကြည့်လာတာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ကြာဇံချက်က ဆီမပါကောင်းပါ့မလား…
ကျောက်စ် ရေးတော့ ငယ်တုံးက မြောင်းမြ-ပုသိမ် သင်္ဘောစီးခဲ့ရတာ သွားသတိရတယ်…
၀ါးခယ်မ ဆီထမင်းနဲ့ ငါးကြော်… ပြီးတော့ ဘယ်မြို့နားနီးလဲမသိ ခြင်တွေတပုံကြီးဝင်လာလို့ ခြင်ထောင်ချထားရတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ကြက်ပြုတ်ကိုဆီသတ်ရင် နဲနဲတော့ပါမှာပေါ့…
ခြင်ပေါတာအမှတ်တရကတော့ ဝါးခယ်မနားက “ရွှေလောင်း” ပဲ…
ခြင်တွေဆိုတာ အဆုပ်လိုက် ပြုံခဲနေတာပဲ…
တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် အဲသလောက်ခြင်အကိုက်မခံရဖူးဘူး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -ကြာဆံချက်ထက်…ရဲစခန်းမှာ နှိပ်စက်ခံရတဲ့ကိတ်စ ခေါင်းထဲပိုရောက်သွားတယ်
-အာ့မျိူးးဒေ ကြားရရင် စိတ်မချမ်းသာဘူးညော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ရဲဆိုတဲ့အမျိုးက မနှိပ်စက်ရရင် စားမဝင်ဘူးလားမသိ…
လက်သွေးချင်လို့ တမင် ထုတ်ရိုက်တယ်ဆိုတာရှိသေး…
နယ်တွေမှာ ပိုဆိုးမယ်ထင်ရဲ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ငယ်တုန်းက ရထားစီးရင်း ဘေးနားလာအော်သမျှ ဈေးသည်အစုံဝယ်စားရတာ အရမ်းကြိုက်တာ..။ အကြော်တို့ ဆီထမင်းတို့….ရထားစီးချင်တာထက် အဲ့ဒီအသည်တွေဆီက စုံစီနဖာလိုက်စားရတာကို ပိုကြိုက်တာ.. အဲ့သည်တုန်းက ရန်ကုန်-လားရှိုးရထား အစုန်အဆန်ကူးခဲ့တာရယ်…. ။ ဂုတ်ထိပ်တံတားပေါ်ရောက်ရင် အိပ်ပျော်နေလဲ အမေကနှိုးတယ်…။
ကြာဇံချက်ကတော့ အရမ်းကြိုက်ပဲ…။ အမယ်များလေ စားကောင်းလေ….. အပေါ်ဝေ့နေတဲ့ ဆီတွေကိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် ဖယ်ဖယ်စားတယ်
ခုတောင်.. လွမ်းလာပြီ…. ဒီချိန်ဘယ်နားရှာရပါ့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ခရီးသွားရင် အဲသည့်လို စုံစီနဖာစားရတာ ဦးလေးလည်းကြိုက်တယ်…
အဲ တတိယနှစ်ကွင်းဆင်းတုန်းက ပဲခူးဘူတာမှာ ဘဲကင်ဝယ်တာ…
ဘဲမံမီနဲ့မိသွားတာတော့ မေ့မရ … ခြောက်ပြီး မာတောင်နေပြီ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 154
HMM says: အာဝဇ္ဇန်းရွှင်တဲ့ အူးအောင်သိန်းရယ်… ‘နေညိုလေပြို’ ကြာဆံချက်ဖြစ်ဖြစ် ‘ဟင်္သတအောင်သိန်း’ ကြာဆံချက်ဖြစ်ဖြစ် နာမည်လေးတပ်ပြီး ရွှီးလိုက်ပြီးရော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟီ ဟိ သူ့မှာရွှီးနိုင်ဖို့ နေနေသာသာ ရင်တုန်နေတာတဲ့…
ပြီးမှ သူချက်ထားတဲ့ မကောင်းမကန်းကို ကတော်ချုပ်က ကောင်းတယ်ပြောလို့…
ဟန်လုပ်ပြီး အတင်းစားပြနေတဲ့ ဝန်ကတော်တွေကို မြင်တော့…
အသံထွက် ရယ်မိမှာစိုးလို့ မနဲအောင့်ထားရသတဲ့… လူတွေ လူတွေ ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ငယ်ငယ်တုန်းက ဧရာဝတီသင်္ဘောစီးရင် သင်္ဘောပေါ်က ထမင်းဆိုင်မှာစားရတာကို သိပ်သဘောကျခဲ့တာ။
ဦးအောင်သိန်းကြီးဆိုင်များ ဖြစ်ခဲ့မလားတောင် မသိနိုင်ဘူး။
ဦးကျောက်ခဲ says: ရန်ကုန် – ပုသိမ်သင်္ဘောဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်…
အာ ဟိ … နာမည်ကို တစ်လုံးလွှဲထားတာ အန်တီမာမား… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: သဘောက.. စိတ်မပါ့တပါမို့.. တလွဲကြာဆံချက်ပေါ့..
ဒါမှမဟုတ်.. အမူးသမားသိုင်းလို… မူးလေကောင်းလေ..လား..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: တလွဲကြာဆံချက်ကို လူကြီးကတော်က ကောင်းတယ်ဆိုတော့…
ဘေးက “အနားပြာ”တွေ မကောင်းလည်း လိုက်ကောင်းကြတာလေ… ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: ဘာ အရသာမို့
ကြက်ကန်း ဆန်အိုးတိုးပြီး အကြိုက်တွေ့သွားရတာတုန်း ဗျ…….
ဦးကျောက်ခဲ says: သူ့ဟာသူတောင် ချက်ရတာစိတ်မပါလို့ မကောင်းဘူး ဝန်ခံထားတာ…
ခံတွင်းပျက်နေတဲ့ ကတော်ချုပ်နဲ့တွေ့တော့ ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးသွားတာပေါ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ကျုပ်လည်း ဧရာဝတီသေဘောင်္မျိုးစုံနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းနှံ့ခဲ့ပါသဗျ
ဦးကျောက်ခဲ says: အရင်ကတော့ ဟုတ်တယ်ဆြာမိုက်ရဲ့… အခုတော့သွားပြီ…
ကုန်းလမ်းက ခရီးသွားကြတာများတော့ ရိုးရိုးခရီးသည်က မရှိသလောက်…
ဧရာဝတီသဘောင်္တွေက အခုဆို ငါးနဲ့ ကုန်တွေပဲသယ်တော့တယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 188
Nyo Win says: ဒါနဲ့ ……..
အဲ့ဒီနေ့ က ဦးအောင်သိန်းကြီးနိုင်သွားလားဟင်…ဆကျောက်စ်…:D
ဦးကျောက်ခဲ says: အဲသည့်နေ့က နိုင်ပါ့ဗျား … ဦးအောင်သိန်းရှုံးတာ မတွေ့ဖူးသလောက်ပဲ…
၁၂-မျိုးဟင်းချို အကြော်အလှော်တွေနဲ့ ကျောက်စ်တို့လည်း အူစိုတာပေါ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1317
Crystalline says: တော်စပ်မှုကိုရေးတာ….ခုထိစပ်မတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်… :D ခွေးတွေကိုလည်း… အရက်တိုက်တာလား… အဲ့ဘွားတော်ကလည်း… တသက်လုံး…အစားကောင်းမစားဖူးတာနေမယ်…. သများဆို… သူများ food review ရေးတာတွေ..ကွန်မင့်တွေဖတ်
ဦးကျောက်ခဲ says: ဖအေတူ မအေကွဲပါဆို… ဝီးပါ့ကွီ… ဟီ ဟိ
ဦးအောင်သိန်းက အိမ်လည်လာတဲ့သူလည်း အရက်တိုက်တယ်…
ခွေး ကြောင် ကြက်တူရွေးတောင်တိုက်တာ … အမြည်းနဲ့လေ…
ကျောက်စ် သန်းမဂျီးဖြစ်ရင် ညည်းကို အစားအသောက်ရေးရာဝံဂျီးခန့်မယ်… ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ခွစ်လေးရဲ့ စစ်တပ်ကို ရီးပဲ လို့ အစဲသော့ဗါပူး… ဂလုထဲ ပျံလာဘ်ခံပေးပါ။
တောင်ပေါ်သား says: ဟိုးတုန်းက ဗန်းမော် – မန်း သင်္ဘောကြီးတွေက အဆန် ၃ ညအိပ် ၄ ရက် ၊ အစုန် ၂ ညအိပ် ၃ ရက်ဆိုတော့ ပျင်းနေအောင်စီးရတာဗျ ၊ သင်္ဘောပေါ်မှာက စာအုပ်ဆိုင် ထမင်းဆိုင် အဲ အဲ ဖဲဝိုင်းက ၃ – ၄ ဝိုင်း ၊ ဟီး ဟီး လွမ်းလိုက်တာ ၊ အခုတော့ ကားက ၁၂ နာရီပဲကြာတော့ ကားစီးကြ ၊
ရေလမ်းဆိုလည်း ရှပ်ပြေးပဲ စီးကြတော့ အညာဆန်ကြီးတွေခမျာ ကုန်သင်္ဘောဘဝ ရောက်ရရှာလေသတည်း ပေါ့ ၊ မိုးတားမုန့်တီမစားရတာ ဆယ်နှစ်မကတော့ပါဘူးဗျာ ၊
ဦးကျောက်ခဲ says: ဝုတ်ဒယ်… ဝုတ်ဒယ်…
တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဖဲကြိတ်ဝိုင်းလည်းရှိ… ဟီ ဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: တိုးတိုးတိတ်တိတ်ကို မဟုတ်
အစောင့်လိုက်တဲ့ ရဲတွေလည်း ဝင်ဆွဲတာပဲ ၊
ညနေဆို သင်္ဘောခေါင်မိုးပေါ်တက် ၊ ယမကာဝိုင်းတွေက လွမ်းစရာ
ဦးကြောင်ကြီး says: အူးမျိုးတမီးကို ခြစ်သယ်ဂျာ… ဒါနဲ့ ဗါပုလျို့ အနော့်ကို ဘော့သွားဒါလျဲ….
မြစပဲရိုး says: ကျောက်စ် လက်ရာ ဖတ်ရင်း ဧရာဝတီမြစ်ထဲ နှစ်ထပ်သဘောင်္ကြီး နဲ့ တစ်ခါက ခရီး သွားတာ တွေ လွမ်းမိပါ့။
အဲဒီ တုန်းက လဲ ပြည်က နေ မန္တလေး ကို စုန်/ဆန် သွားတဲ့ သိပ္ပံမောင်ဝ ရဲ့ “မင်းလတ်” ကို မှန်းပြီး လွမ်းခဲ့ဖူးတာပါ့။
မဖတ်ရတာကြာလို့လား မသိ အရသာရှိတာမှ ဦးအောင်သိန်း ရဲ့ ကြာဆံချက် အတိုင်းပါဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: နိုင်ငံရေးနှိပ်စက်တာ စာရေးချင်စိတ်ပါပျောက်သွားလို့…
ဟရောင် ကျောက်စ်… မုဗ် မုဗ်… ဟီ ဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1148
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says: ငယ်ငယ်က ဝါးခယ်မသွားရင် …. သင်္ဘောနဲ့ကိုး … ဧရာဝတီသင်္ဘော(အစိုးရပိုင်) စီးရင်တော့ အစားအစုံ မစားရဘူး .. ကြားသင်္ဘော(ပုဂ္ဂလိကပိုင်) ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းကထွက်ကတည်းက ခေါက်ဆွဲသုပ်၊ ကြာဇံသုပ် ၂ပွဲအုပ်ပီးသား ပြီးရင် အိမ်သာပြေးဘီ ;) ….. တွံတေးကြော်လို့ မြစ်လေးခွဆုံရောက်ရင် ထမင်းလှေ ဆီထမင်းလှေ တွေ ကပ်လာပီ … ထမင်းပူပူကို ငှက်ပျောဖက်နဲ့ထုပ်လို့ ကြက်သား၊ ဝက်သား၊ ပုစွန် စတဲ့ဟင်းတွေကို ဆီပါးပါးပြန်ထားတဲ့ ခပ်စပ်စပ် ကရင်ချက်ဟင်းတွေနဲ့ ဗူးသီးဟင်းခါး တချို့ကျလည်း ချဉ်ပေါင်ဟင်းပေါ့ စားရတဲ့ အရသာ ဒီနေ့အထိ မမေ့နိူင်
ညလည်စာ ဆီထမင်းထုပ်ကို စာလေးကြော်နဲ့ သိမ်းပီးသကာလ … မအူပင်ရောက်ရင် သရက်သီးချဉ်ငံစပ် စားရကောင်းမလား? ငှက်ပျော်ကြော်ပဲ စားရကောင်းမလား? အဖွားကို မေးရတာအမော … ကျောင်းပိတ်လို့ ဝါခယ်မပြန်တိုင်း အဖေပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးက သင်္ဘောပေါ်မှာတင် တဝက်ကုန်တယ် ခုများတော့ ရုပ်ဝတ္ထုတို့ဆီ လိုက်ရင်းပြေးရင် ဒေသ၊ သဘာဝရဲ့ အရသာတွေကို မခံစားနိူင်ခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တွေ ကျော်ပီလေ ….. စကားမဆီမဆိုင် တခါသား သီတင်းကျွတ်ကျောင်းပိတ်ရက် ဝါးခယ်မပြန်ရင်း … သင်္ဘောပေါ်မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ မအူပင်သူ လသာမှာနေတဲ့ လွင်မာထွေးဆိုတဲ့ တရုတ်ကပြားမလေးကို သတိရသား အဟေး အဟေး
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟုတ်တယ်ဗျ… တွံတေးတူးမြောင်းအဝမှာ လှေကလေးတွေနဲ့…
သက်စွန့်ဆံဖျား မောင်းနေတဲ့သင်္ဘောကြီးကိုကပ်ပြီး တက်ရောင်းတဲ့…
ဈေးသည်တွေနဲ့ စားစရာတွေကိုလည်း လွမ်းတယ်…
အခု သင်္ဘောခေတ်မဟုတ်တော့ သူတို့ ဘာလုပ်စားကြတယ်မသိ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.